Home News Taliska Ciidanka Xoogga Dalka Oo Ku Guuleystay Iney Kala Qaadan Maleeshiyo beeleed...
Taliska Ciidanka Xoogga Dalka Oo Ku Guuleystay Iney Kala Qaadan Maleeshiyo beeleed Isku Hor Fadhiyay Marka
Wararka ka imaanaya magaalada Marka ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in Guutada 14 October ee ciidanka xoogga dalka ay ku guuleysteen inay kala qaadaan maleeshiyo beeleed isku hor-fadhiyay xaafado ka tirsan degmadaas muddo afar sano ka badan.
Maleeshiyaadkan ayaa in muddo ah isku hayay magaalada Marka iyo deegaano ka tirsan Shabeellaha Hoose, waxaana intii ay socotay colaada u dhaxeysa ay sababtay in dad fara badan ku dhintaan iyo degenaansho la’aan hareysay deegaanada ay isku hor-fadhiyeen.
Saraakiisha Ciidanka xoogga dalka ayaa ku wacyi geliyay Ciidamada inay ka qeyb qaataan ilaalinta nabadgelyada iyo dowladnimada, isla markaana loo midoobo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Qeybaha bulshada ayaa qeyb ka ahaa kala qaadida maleeshiyaadka isku hor-fadhiyay xaafadaha Marka, waxaana ay sheegeen in tallaabadan ay ka qeyb qaadaneyso nabadgelyada magaalada Marka oo muddo afar sano aheyn mid aan wanaagsaneyn.
Magaalada Marka iyo deegaanada ku dhow dhow ayaa waxaa ka dhacay dagaal beeleedyo soo laab-laabtay, waxaana lagu guuldareystay dib u heshiisiin dhowr jeer la kala dhex dhigay beelaha dagaalamayay.
Previous articleKulankii Golaha Iskaashiga Dowlad Goboleedyada Ee Garoowe Ay Kulahaayeen Oo Dib U Dhac Uu Ku Yimaaday
Next articleMuxuyidiin Xasan Afrax ”Waa In La Soodhaweeya Balaarinta Baaxada Gobolka Banaadir”
Nin Dhakhar ahaa oo Xanuunka HIV qaadsiiyay 90 ruux
Dowladda Kenya oo xaqiijisay in Ururka Al Shabaabv ay sii daayeen...